Muuqaal: Wasiirka Amiga Puntland Iyo Ciidamo uu Hogaaminayo oo Gaadhay Gobolka Sanaag iyo Digniin Somaliland | Kalshaale
Muuqaal: Wasiirka Amiga Puntland Iyo Ciidamo uu Hogaaminayo oo Gaadhay Gobolka Sanaag iyo Digniin Somaliland
Nov 12, 2017 - 18 Aragtiyood
Garoowe (Kalshaale) Soo dhaweynta Kadib Wasiirku wuxuu sheegay in u jeedada socdaalkooda uu la xidhiidho sidii beesha caalamka iyo Ummada soomaaliyeed loogu soo bandhigi lahaa in gobolka Sanaag ayan ka jirin wax doorasha ah oo dhinaca Somaliland ka timaada.
P/land beenta joojiya waan hubaa haddii maleeshiyaadka SNM soo dhaqaaqaan in aad cararaysaan.
Waa igu sawir Muxuu badhan ka doonay muu l/caanood soo aado?
Land P/land ayaa yaabay.
Dagaal micnihiisu waa isdil. Isdil micnihiisuna waa islayn. Maxaa laga faaiidi oon khasaaro ahayn. Waa waxba. Qofka nool in noloshiisa sidii loo badbaadin lahaa laga fakaro ayaa wanaagsan.
Waa runtaa caqli saliimka ahina sidaasuu sheegayaa, laakiin mid ogow labadan Maamul they know each other, keliya shacabka ayaa latusayaa durbaan been ah oo beri hore ka ilbaxay.
Dagaal ka labadan maamul waxaa kadhow dagaal ka dhex dhaca USA IYO SNM.
Sorry. Waxaan idin leenahay Beeneey waa run.
Wasiirku banaan cad buu ka hadlayaa aaway magaaladii iyo daarihii? Lol
Qoraalka hore waa kaftan😀
Laakiin sidaa Hayaan u sheegay Puntland iyo Somaliland ma dagaalamayaan.
Waa baalixoofto siyaasadeed😀😀😀
Dagaalka hungurigu ma dhamaado.
Dagaalkii HUNGURIGA meel kasto oo somaliya ka mid waa uu ka jiraa
Dad degan oo nabad haysto ayaa la rabaa in ay qaxaan magaranaayo waxa laga faa.iidi doono malaha hungurigii ayaa galay halkaas
Meeyay itoobiya xuduudii ay u sameysay 2 maamul?
Hunguri iyo nabadi ma wada joogi karaan degaanka Somaliyeed .
Somaliland dagaal ma rabto.Sidaa oo puntland dagaal ma rabto.Galmudug,dagaal ma rabto.Ahluna dagaal ma rabto.Bal cidda dagaalja rabta soo hela.Dalmida
Walaahi Somaliland waxdadaashay hadayba sanduuq dhigatay Baran iyo Hadaftimo.
Kuye guriga ha kasoo bixina, macnaha sanduuqii waa yaalaan! Lkkkk
Dhuloos ku daa, hadda Waroos loo soo jeestay!
Macnaha dad reer Sanaag ah doorashada qabanqaabinaya!
Yaan la isdilin Maryooley, shacabka ayaa awood u leh, waxay rabaan!🤔
Ciidamada awooda Badan ee gobolka Cayn oo Ruqaansaday , iyagoo baadigoobaya sanadiiqda snm . Dhamaan xaduudka gobolada Cayn Iyo Togdheer bay xidheen.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk dadku maanta hasii adeegtaan barina guryaha hakasobixina kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjj iyo badhan ayaa nu sogaadhnay bal isqabad siiya reer puntland
Iidoor yare nagadaa ciyaarta
Meesha dhulos way kudaayeene waaroos baa lagahad layaaye
anigu koleey u maleeyn maayo in majeerten iyo isaaq dagaalamayan hadeey lacala dagaalamana ma ahan rag isu babac dhigi kara dhoowr daqiqadood qof kastaana taa waa ogyahey …… inteed rabtaaye inteed rabtaaye roroor ma roone reerkaaga jogeey
Wanku fahmaynaa o waxaad leedahay mj ayaalaga adkanaya e idoorkii faankodi wanu soo af jarnay carkeena ayaaka dhcaday e miyaadka naxday kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk waar waxba haw ceeb qarin halna xasuusnoow majeerten hadusan dagalamin walhi qabiil somaliyeed o dagalama majiro ,Cadeyn 100 sano maxaanku xukumayey ilaa iminkana xukunka iyo siyasada waxlayga weydiyaa anigoo qabiilda kabadneyn ? sow xininyo iyo xabadeyda kulul maaha ?kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Caawa sidaan rabay ayaad uhadkeysaa waliba sihoose kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Imisaanku laheyn rerkagu waa laangaab e meel fadhiiso dadkaan uma dawladeyn kadhide sow idinka kuwashay maaha Puntland dagaalaka naga dhafacadowgeena badane cadowgu rer xamarkaan isbarada iyo bililiqada kuwashay miyaaa kuwaasna xagaanka karbashyaa kuiwanan mirqaanka isku iloobayna wanku darayaaa e car ceerigaabo daantina isoo dhaaf kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Plz noocodeeya ayaaka dhacday kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk